Bogga ugu weyn Sida Loo Bilaabo Ganacsiga Cuntada 2022 | Hagaha Buuxa
Waa maxay Taariikhda Ganacsiga Cuntada?
1. Cilmi baaristaada
2. Abuur xeelad ganacsi
3. Go'aanso meel
4. Hesho shati iyo ogolaansho
5. Hel dhammaan qalabka
6. Samee menu
7. Shaqaalayso shaqaalahaaga
8. Caymis qaado
Caymiska mas'uuliyadda dadweynaha:
Caymiska mas'uuliyadda loo-shaqeeyaha:
Caymiska dhismayaasha ganacsiga:
Warshadaha cuntada ee aynu naqaano oo jecelnahay maanta runtii waxay bilawday horumarkeeda wakhti dheer ka hor. Intee in le'eg ka hor si sax ah? Waxay noqon kartaa qof kasta male. Xisaabaadka ugu horreeya ee adeeggu waxay dib u soo laabanayaan qarnigii 4aad ee BC ee Shiinaha, laakiin xitaa markaa, dhaqanka diyaafadda weyn iyo cabitaanka ayaa horey u ahaa dhaqan baahsan oo ilbaxnimooyinka oo dhan ah.
Dhacdooyinka noocan oo kale ah waxay inta badan xuddun u ahaayeen boqorrada iyo haybta adeegyada - inta badan - ee ay bixiyaan addoommada ama addoommada.
Ameerika, adeeggu wuxuu noqday xirfad ganacsi oo la ixtiraamo oo faa'iido badan leh meel ka mid ah qarnigii sagaal iyo tobnaad waxaana hormood ka ahaa ganacsade cunto siiya Robert Bogle in Philadelphia. Tan iyo markaas, adeeggu wuxuu noqday qayb muhiim ah oo ka mid ah bulshada casriga ah.
Hab-nololeedka guud ee dadweynaha wakhtigan iyo waayahaan waxa uu u jihaystay in si hufan looga faa’iidaysto wakhtiga.
Inta badan dadka maalmahan aad ugu mashquulsan shaqada iyo hawl maalmeedka kale waxay door bidaan inay iska bixiyaan cunto hore loo sameeyey si ay wakhtiga u badbaadiyaan halkii ay la kulmi lahaayeen dhibta ay u diyaariyaan iyaga laftooda. Isbeddelkani waa waxa abuuraya baahida sii kordheysa ee adeegyada cuntada ee xirfadlayaasha ah, waana waxa ka dhigaya ganacsi faa'iido badan leh.
Waa inaad hubisaa; Sida Loo Bilaabo Meherad Nadiifinta Laga Soo Bilaabo xoqitaanka 2022?
Marka loo eego tirakoobka, Warshadaha cuntada ee Maraykanka ayaa soo saaray dakhli dhan $11.35 bilyan sanadka 2019 oo keliya. Ka dibna celceliska dakhliga soo gala cunto-bixiyaha wakhtiga buuxa waa waxa lagu qiyaasaa ilaa $53,000 sanadkii.
Hadda waxaa laga yaabaa inaad is waydiiso, sidee baan ku bilaabo ganacsi cunto? Waa imisa qiimaheedu? Maxay keenaysaa?
Waa kuwan sida loo bilaabo ganacsi cunto karinta oo 8 tallaabo ah.
XIDHIIDHKA: 15 Kaararka Amaahda Ugu Fiican ee Badbaadada Loogu Talagalay Deynta Xun 2022
Sidoo kale hubi; Sida Loo Bilaabo Meheradda Gawaarida Cuntada 2022: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Kahor intaadan furin shirkad cunto kariye, waxaa muhiim ah inaad marka hore barato suuqa iyo dhammaan isbeddellada hadda socda ee saameeya ganacsiga. Si fudud ayaad tan u samayn kartaa adiga oo meesha ka saaraya tartanka. in la ogaado sida ay u shaqeeyaan, cuntooyinka ay iibinayaan iyo qiimaha ay ku iibinayaan. Markaad taas sameyso waxaad eegi kartaa macaamiishaada mustaqbalka iyo dookhooda. Macluumaadkan ayaa laga yaabaa inay kaa caawiyaan inaad go'aansato meel, kaas oo noqon kara cunnada maxaliga ah ee aadka looga jecel yahay bulshada dhexdeeda ama liiska cuntooyinka macaan ee dahsoon ee aan aad loo raadin.
Waxa kale oo aad go'aansan kartaa nooca adeegga cuntada ee aad u socoto, kuwaas oo dhowr ka mid ah-
Cunto qaadashada mobilada.
Adeeg bixinta qandaraasyada (dhacdooyinka, xafladaha, aroosyada iyo soo dhaweynta).
Qado sanduuq ah, iwm.
Sidoo Kale Akhri; Sida Loo Bilaabo Boutique Online ah 2022: Hagaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Istaraatiijiyad wanaagsan ayaa loo baahan yahay si loogu guuleysto warshado tartan ah sida cunto-siinta.
Si aad tan si sax ah u sameyso, marka hore waa inaad aqoonsataa faa'iidadaada tartanka. Tani waxay noqon kartaa wax kasta laga bilaabo adeegsiga habab qiimo leh oo cunto samaynta ilaa gudaha iyo adeegyada tafatirka, gaarsiinta iwm.
Dabcan, tani waxay kaa caawin doontaa inaad dejiso miisaaniyad, taas oo awood kuu siin doonta inaad dejiso qiimahaaga.
Sidoo kale ogow in celceliska qiimaha bilawga ganacsi cunto-cunto yar uu yahay ku dhawaad ​​$10,000 sida ay qabaan falanqeeyayaasha entrepreneur.com. Waxaad u baahan doontaa inaad ku xisaabtanto qalabkaaga, gaadiidkaaga, iyo baahiyaha suuqgeyneed.
Goobta meheraddaada cunto-cunista waxay saamayn wayn ku yeelan kartaa tayada adeegyadaada.
Tusaale ahaan, haddii makhaayaddaadu ku taal meel aan nadiif ahayn, ma soo jiidan doontid tirada macaamiisha aad u baahan doonto si aad ugu sii jirto ganacsiga. Si la mid ah waa run haddii goobtaada ay buux dhaafiyeen tartamayaasha, ama ay leedahay muuqaal liidata, ama aan si fudud loo heli karin. Kuwani waa arrimo ay tahay in la tixgeliyo marka la raadinayo meel aad ka furto ganacsigaaga cunto-bixinta.
Sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad dejiso meel u dhow suuqa aad beegsaneyso, gaar ahaan aagga gaadiidka badan yahay oo si sahlan loo heli karo sababtoo ah tani waxay kordhineysaa fursadahaaga macaamiisha mustaqbalka.
Ruqsad siinta iyo ogolaanshaha ayaa looga baahan yahay inay ganacsi ka sameeyaan goob kasta kuwaana way ku kala duwan yihiin gobol ilaa dawlad, waxayna ku xidhan tahay haddii qorshahaaga ku darista cabitaanka khamriga liiskaaga, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad hesho ogolaansho gaar ah taas, maadaama ay sharci darro ku tahay qaar badan gobolada Mareykanka oo dhan si ay ugu adeegaan khamriga ilaa aad ogolaansho ka heysato hay'adda sharciyeynta ee gobolka.
XIDHIIDHKA: Waa maxay Xusuus-qorka Daynta?
Waxaad wax badan ka baran kartaa shuruudaha shatiga gobolkaaga adiga oo ka hubiya laanta degaankaaga ee Maraykanka Maamulka Ganacsiga Yaryar (SBA).
The decision to either purchase or rent this equipment may be influenced by your budget or long-term plans. It’s highly recommended that you visit Amazon.com or Arbacada ah Haddii aad go'aansato inaad iibsato qalabkaaga tiro badan.
Mid ka mid ah tillaabooyinka ugu xiisaha badan marka la tixgelinayo sida loo bilaabo ganacsiga cuntada waa abuurista liiskaaga ka dibna tijaabi suxuuntaada!
Markaad abuurto liiskaaga hubi inaad bixiso doorashooyin kala duwan si aad u dejiso dhadhanka macaamiisha iyo dookhyada kala duwan, sida xulashooyinka basbaaska iyo kuwa aan basbaaska lahayn. Xitaa haddii aad kaliya ku takhasustay cunto gaar ah, hubi in menu-kaaga uu soo jiito inta badan.
Akhri ALSO: Sida Loo Bilaabo Ganacsiga Socodka Eeyga 2022 | Hagaha Buuxa
Tallaabada xigta ee macquulka ah ee dejinta ganacsigaaga cunto karinta waxay noqon doontaa inaad qorto gacmo dheeraad ah si kor loogu qaado wax soo saarka iyo waxtarka.
Run ahaantii, tillaabadani ma aha hannaan hal-shubo ah oo waxa laga yaabaa inay qaadato wakhti kala-soocidda iyo tababarka shaqaalaha ka hor inta aanu ganacsigaagu gaadhin waxtarka ugu sarreeya ee la doonayo. Isku day in aad u samrto arrintan.
Tani waxaa laga yaabaa inaysan wax macno ah u samayn kuwa ka shaqeeya adeegga cunto-cunista ee yar-yar laakiin marka ganacsigaagu kordho waxay noqon lahayd mid taxaddar leh si aad u hesho shirkaddaada caymis maadaama dhacdooyinka lama filaanka ah ay u muuqdaan inay dhacaan waqtiyo aan munaasab ahayn sida lagu sheegay Sharciga Murphy.
Marka la eego qoraalkaas, waa inaad isku daydaa inaad iibsato noocyada badan ee caymiska inta aad u baahan tahay si aad u daboosho hantidaada oo aad uga ilaaliso dacwadaha.
Halkan waxaa ah liis caymisyo ah oo laga yaabo inaad rabto inaad ka fikirto ganacsigaaga;
Middani waxay dabooshaa kharashaadka sharciga ah ama sheegashooyinka magdhowga haddii macaamiisha ama alaab-qeybiyeyaashu ay soo gaadhaan dhaawac shakhsi ah ama waxyeelo hantiyeed sababtoo ah ganacsigaaga.
XIDHIIDHKA: 10 Barnaamijyada Shukaansiga Bisexual ee Bilaashka ah 2022
Waxay ka ilaalisaa kaydkaaga iyo qalabkaaga burburka iyo xatooyada.
Sida saxda ah loo sheegay. Waxay ka ilaalisaa aasaaskaaga burbur.
Waa maxay shatiyada aad u baahan tahay si aad u bilowdo ganacsi cunto?
Waxaad u baahan doontaa shatiyo heer gobol ah, shati ganacsi iyo shatiyo iyo ogolaansho degmo ama degmo. Marka lagu daro shatiyada iyo ogolaanshaha gaarka ah ee la xidhiidha u adeegista cuntada, sida ogolaanshaha caafimaadka iyo shatiga maaraynta cuntada, waxa kale oo aad u baahan kartaa in aad hesho shatiga khamriga.
Ma u baahan tahay ruqsad si aad u bilowdo ganacsi cunto?
Haa, waxaad u baahan doontaa shati si aad u bilowdo ganacsi cunto cunid.
Sideed Guriga uga Bilaaban kartaa Meherad Cunto-karin?
Hel ogolaanshaha iyo ogolaanshaha loo baahan yahay
Isha qandaraasyada/Horumar iyo Suuqgeynta ganacsigaaga
Immisa ayay ku kacaysaa in la bilaabo Ganacsi Cunto-qaadid?
Maxaa Ka Dhiga Shirkad Cunto Wanaagsan?
Xoog-shaqaale heer sare ah
Soo bandhigid cunto heersare ah iyo xirfado adeeg
Eedaha macquulka ah et al
Immisa ayay ku kacaysaa in la bilaabo ganacsi cunto-cunista yar?
Markaad raacdo warbixinta cilmi-baaristayada iyo daraasadaha suurtagalka ah, waxaa lagu qiyaasaa in ganacsiga cuntada uu ku kici doono $10,000 - $44,000 si loo bilaabo.
Waa maxay Kharashka Bilawga Caadiga ah ee Meheradda Cunto-bixinta Cusub?
Sideen u wanaajin karaa iibka cuntadayda?
Hal abuur ku samee suuqgeyntiisa.
Dhacdooyinka dhadhanka martida.
Kalsooni la samee macaamiishaada.
Ha lumin macaamiisha soo-galka.
Abaalmarino macaamiisha u gudbiya kuwa kale ganacsigaaga.
Intee Ayuu Weyn Yahay Warshada Cuntooyinka?
Baaxadda suuqa ee qaybta cuntada ee Maraykanka ayaa gaadhay 11.35 bilyan oo doolarka Maraykanka ah sanadka 2020, taas oo muujinaysa hoos u dhac marka loo eego cabbirkii sannadkii hore oo ahaa 12.97 bilyan oo doolarka Maraykanka ah. Qeybta ayaa la saadaaliyay inay gaari doonto ku dhawaad ​​​​12 bilyan oo doolar sanadka 2021.
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Magaalada Virginia
200 ee fikrado ganacsi ee ugu sarreeya Hindiya
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Oregon
Ma iibin kartaa baabuur on Craigslist? Hacks fudud 2022
Dib u eegisyada Caymiska Xayawaanka Figo 2022: ma sharci baa mise waa khiyaamo?
Wakaaladda Daryeelka Guriga ee ugu Mushaharka Badan 20 | Dawladaha Ugu Fiican
Waa maxay Wakaalada Daryeelka Guriga? Wakaaladaha daryeelka gurigu waa machadyo diiwaan gashan oo siiya taageero badheedh ah shakhsiyaadka…
Ma jiraan wax kaa ilaalinaya kursigaaga marka loo eego marka rubuc-dhabarka u lulanayo hore-u-socod degdeg ah u gudba ballaaran…